Wararka Maanta: Talaado, Oct 2 , 2012-Madaxweynaha Somalia iyo wafdi uu Hoggaaminayay oo Degmada Baladweyne gaaray kulammana la leh Maamulka iyo Waxgaradka
Ciidamada maamulka gobolka Hiiraan, kuwa Itoobiya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan Baladweyne ayaa waxay adkeeyeen amaanka guud ee magaalada, madaxweynuhu wuxuu hadal kooban oo uu jeediyay ku sheegay in dowladdu ay gacan siinayso cid walba oo ay dhibaato kasoo gaareen fatahaadda.
Wariyaha HOL ee Baladweyne, C/raxmaan Diini ayaa sheeagy in madaxweynuhu uu booqan doono xaafadihii ay fatahaaduhu ka dhaceen iyo goobaha ay dadku ku barokaceen, markaas kaddibna uu ka hadli waxay dowladdu u qabanayso dadka ay fatahaaduhu saameyeen.
Fatahaadihii ku dhuftay Baladweyne ayaa barakaciyay kumannaan qof oo shacab ah, kuwaasoo ku noolaa xaafadaha ay fatahaadddu sida ba'an u saameysay, waxaana dadkaas ay ku nool yihiin hadda deegaanno magaalada ka baxsan.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa inuu si kooban ula hadlay saraakiisha markii uu ka dagay garoonka diyaaradaha Baladweyne saraakiisha ka socda dalka Jabuuti ee hoggaaminaya ciidamada AMSIOM ee ku sugan Baladweyne oo ka socda Jabuuti.
Booqashada madaxweynaha uu ku tagay Baladweyne ayaa waxay noqonaysaa tii labad oo uu ku tago degmo ka tirsan Soomaaliya tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya, isagoo shalay booqday magaalada Baydhabo.
Wararka ku saabsan doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa waxaad kula socon doontaa wararkeenna dambe haddii Alle ogolaado.